DAAWO:Hal-milyan oo Doolar Ayuu Ku Bixiyey Si uu u Sameeyo Tijaabooyin Yaab Badan Si Ay Ugu Suurtogasho Inuu… | Baahin Media
DAAWO:Hal-milyan oo Doolar Ayuu Ku Bixiyey Si uu u Sameeyo Tijaabooyin Yaab Badan Si Ay Ugu Suurtogasho Inuu…
Inteenna badan waan ka haybadeysannaa duqnimada, waxaan u aqoonsan yahay in qofku uu weynaado ay ka dhigan tahay inuu galayo tijaabo ay cudurro badan ku hareeraysan yihiin oo kalinimo iyo xanuun badan leh, laakiin Dave Asprey, oo ah ninka iska leh calaamadda gacansi ee Bulletproof, ayaa waxa uu doonayaa inuu noolaado illaa 180-sano!.
Asbeeri, waxa uu ku qanacsan yahay inuu awoodo inuu hadafkiisa gaaro, maadama uu helay daahrog biology ah oo uu horumarintiisa ku bixiyay hal-milyan oo dolar, sidaas oo kale, waxa uu aaminsan yahay in wax-soosaarkiisa Bulletproof uu noqon doono mid lagu gaaro oo lagu helo cimridherer iyo caafimaad joogto ah.
David, waxa uu lacago farabadan ka sameeyay oo dadku ay ku yaqaannaan Qahwada Bulletproof, sanadkii 2012 qiimeyntii la sameeyay waxaa lagu ogaaday in laga iibsaday 160-milayan oo koob uuna ka helay lacago gaaraya 68-milayn oo dolar, dadku waxey u gataan si ay miisaaka iskaga dhimaan oo xoogaa waxtar ah lagu arkay.
Dadka taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda waxyaabihii ay ka sheegeen
Markii uu xayaysiin u sameeyay David, wax-soosaarkiisa qahwada ah ayaa dad badani soo dhaliileen, gaar ahaan dhakhaatiirta oo ku doodaya in mashruucan uu wado aanuu u lahayn khibrad caafimaad, sidaa darteed; waxey uga digeen dadka iney wax-soosaarkiisa isticmaalaan maadama aan la garaneyn khatarta ka imaan karta inta ay gaarsiisan tahay.
Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad badan oo taagooro u haya, gacansigiisa Bulletproof uu natiijooyin wax ku ool ah gaaray oo dad badan uu noloshooda wax ka bedelay.
Ganasadahan Mareykanka ah ee 45 jirka ah, isla markaana ah aasaasaha caalamadda gacansi ee Bulletproof, ayaa waxa uu aamisan yahay in tijaabooyinka biology-ga ah ee uu sameynayo si uu u gaaro 180 sano uu waxwalba u hurayo xitaa haddii ay naftiisu u go’ay, maadama uu aaminsan yahay shay walba la gaari karo.
Lixdii biloodba mar ayaa lafihiisa dhuuxa qaar laga shubaa si uu u helo unugyada Stem cells kadibna loogu tallaaalo jirkiisa.
Sidaas oo kale, qeyb ka mid ah waqtigiisa waxa uu ku bixiyaa qol u gaar ah oo qaboojiyeyaal ay ku rakiban yihiin, waxaana loo adeegsadaan naytaroojiin si jirkiisa loogu qaboojiyo, madaxiisa waxaa lagu shidaa koronto, waxa uu maraa tijaabooyin lagu tilmaamay iney yahay kuwo waalli ah si uu mar un u gaaro yoolkiisa ah inuu noolaado 180-sano.